भारतमा २२५ भन्दा बढीको ज्यान लिएको भाइरस र नेपालमा फैलिएको भाइरस उही, सतर्क रहन सुझाब – Health Post Nepal
२०७५ माघ २८ गते १४:३९
डेढ महिनादेखि भारतमा फैलिएको स्वाइन फ्लु नामले चिनिने मौसमी रुखाखोकी भाइरस (इन्फ्लुएन्जा ए –एच१एन१, पिडिएम०९) र नेपालमा पछिल्लो समयमा धेरै मानिसमा संक्रमण देखिएको भाइरस उही हो ।
भारतमा धेरैको बिमारी र मृत्युको कारण बनेको भाइरस र नेपालमा फैलिरहेको भाइरस उही प्रकृतिको भएकाले उच्च जोखिममा रहेका समूहले रुघाखोकी र लामो ज्वरो देखिएमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने चिकित्सकले सुझाब दिएका छन् ।
नेपालमा पनि पछिल्लो दुई महिनामा मौसमी रुघाखोकीको संक्रमण बढ्दै गएको छ । चिसो मौसम बढेसँगै रुघाखोकीका बिरामीको संख्या बढ्नु सामान्य भए पनि कतिपय अवस्थामा उही भाइरस पनि कडा बन्ने हुँदा जोखिममा रहेको समूहमा संक्रणण भए अवस्था जटिल बन्नसक्छ ।
यससँगै, मौसम परिवर्तन हुनेवेला पनि सिजनल इनफ्लुएन्जाबाट प्रभावित बिरामीको संख्या बढ्ने गर्छ ।
पछिल्लो समय भारतको राजधानी नयाँदिल्ली र नजिकैका राज्यहरू राजस्थान, पन्जाब र हरियाणामा फैलिएको एच१एन१बाट हालसम्म २ सय २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लोपटक दिल्लीमा मात्रै १३ को मृत्यु भएको छ । दिल्लीमा बिहीबार एकैदिन १ सय ३ नयाँ (इन्फ्लुएन्जा ए –एच१एन१, पिडिएम०९) संक्रमितको पहिचान भएको स्वास्थ्यसेवा निर्देशनालयको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो डेढ महिनामा १ हजार १ सय ९६ भन्दा बढीमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
सन् २०१८ मा भारतभर यो भाइरस संक्रमणका १४ हजार ९ सय ९२ घटना पुष्टि भएकोमा सन् २०१९ को पहिलो महिना (जनवरी)मा ६ हजार ७ सय १ जनामा (इन्फ्लुएन्जा ए –एच१एन१, पिडिएम०९) को संक्रमण देखिएको छ ।
‘भारतमा आतंक फैलाएको भाइरस हामीकहाँ पनि व्याप्त छ,’ वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डा. शेरबहादुर पुन भन्छन् ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका टेक्निसियन तथा माइक्रो बायोलोजिस्ट विष्णु उपाध्यायलका अनुसार सन् २०१९ को ७ फेब्रुअरीसम्म (३८ दिन)मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा ११ सय ५२ जना बिरामीको नमुना परीक्षण गरिएकोमा ५ सया ५९ जनामा इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये इन्फ्लुएन्जा ए (एच१एन१ पिडिएम०९) ४ सय ९० जनामा पुष्टि भएको थियो, जुन अहिले भारतका विभिन्न राज्यमा फैलिएको भाइरस नै हो । त्यसैगरी, १६ जनामा इन्फ्लुएन्जा एच३ र बाँकी ५३ जनामा इन्फ्लुएन्जा बी प्रमाणित भएको छ । यसमध्ये १ सय ४६ नमुना भने पेन्डिङमा छन् । इन्फ्लुएन्जामा चार प्रकारका भाइरस हुन्छन्– ए, बी, सी र डी । ए र बी भाइरस चिसो मौसममा बढी देखिन्छ । बीको तुलनामा ए भाइरस बढी मात्रामा मौसमअनुसार परिवर्तन हुने भएकाले यो बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समय चिकित्सकहरू फ्लु भाइरसबारे धेरै आतंकित नहुन सुझाउँछन् र यसलाई स्वाइन फ्लु भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँछन् । केही समयअघि स्वाइन फ््लुको संक्रमण देखापरको भनी गलत सूचना प्रसारण भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले जनाएको थियो । महाशाखाले स्वाइन फ्लु संक्रमण गलत भएको भन्दै विज्ञाप्तिसमेत निकालको थियो ।
महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले फ्लुबारे प्रदेशस्तरीय सर्भिलेन्स अपनाएको बताएका छन् । ‘हरेक प्रदेशका रोगनियन्त्रण महाशाखामा निगरानीका साथै सतर्कता अपनाउन भनिएको छ,’ उनले भने । तर, आतंक फैलाउन नहुने नाममा र यो सामान्य हो भन्दै पुष्टि गर्नेक्रममा कतै जोखिम समूहप्रति अन्याय त गरिएको छैन ? यस कुरामा सम्बन्धित चिकित्सकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘फ्लु सामान्य नै हो, तर ३ वर्षमुनिका बालबालिका, ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका, दीर्घरोगी (मधुमेह, दम, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला, श्वास–प्रश्वासका बिरामी), गर्भवती महिला, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलगायत समूहका लागि भने यो सामान्य होइन,’ डा. पुन भन्छन्, ‘अस्पतालमा भर्ना हुने र फ्लुका कारण मृत्यु हुनेको संख्या हेर्यो भने करिब ९५ प्रतिशत यही समूहबाट पर्छन् ।’
चिसोको मौसममा घाम कम लाग्ने, बादल लाग्ने, हुस्सु लाग्ने, हावामा पानीको मात्रा बढी हुनेलगायत कारणले मौसम चिसो हुने हुँदा भाइरसहरू लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् । अर्कोतर्फ मौसम परिवर्तन हुने समयमा पनि भाइरसहरू बढी सक्रिय हुने हुँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने र भाइरसले आक्रमण गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । इन्फ्लुएन्जा रोगको परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमा हुँदै आएको छ ।
इन्फ्लुएन्जाका सामान्य लक्षण
– खोकी लाग्नु,
– झाडापखला लाग्नु,
– नाकबाट पानी बग्नु वा नाक बन्द हुनु,
– पेट मडारिनु,
– हाच्छिउँ आउनु,
– मांसपेशी दुख्नु,
– हाड–जोर्नी दुख्नु,
– खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक तथा मुख छोप्ने तथा सफा रुमाल, कपडाले सफा गर्ने,
– साबुनपानीले हात धुने,
– रुघाखोकी लागेका बिरामीले घरमै बसेर आराम गर्ने,
– प्रशस्त मात्रामा झोलिलो खानेकुरा खाने,
– दूध चुस्ने बच्चालाई नियमित रूपमा दूध चुसाउने,
– रोगीको वरिपरि नजाने,
– बिरामीलाई बेग्लै तथा अन्य व्यक्तिसँग टाढा राख्ने,
– आँखा, नाक, तथा मुखमा अनावश्यक रूपमा हात नलैजाने ।